1 2 3 4 ... 4481 Enda pasi
0 Nhengo uye 15 Vashanyi vari kuona nyaya yacho.
« : Musi waFebruary 11, 2008, 01:10:36 am »
Muchikamu chino, unogona kunyora chero chinhu chiri pamusoro wenyaya.
Icho chikonzero nei takavhura zita rakadai ...
Jentzsch neni (esma 41) Isu tinofunga takauraya zvimwe zvidzidzo.
Baba wekutanga wenyaya iyi ndiJentzsch shamwari yedu.
Jenzsch derki:Warevesa, esma41, ndichavhura musoro. Marara mangani anodikanwa, hazvina basa, izvo zvisipo, zvakakosha kunyora ipapo. Zvikasadaro, zvidzidzo zvacho hazvingarambe zviri mukuuraya kwacho mukuuraya. Kukosha? ? atiom forum nhengo dziri kusangana kufa bi gircek, nhengo dzemaforamu dzakapinda mukati.
Pfupiso yezvakanyorwa pamusoro:
Pano iwe unogona kunyora chero chaunoda, uye chero chiri "chinosemesa": iwe unogona kugovana nesu pano.
Hamuna mazwi pano, IVIR ZIVIR pano.
Kugamuchirwa kumusoro wemusoro wekuseka ...
Heino isina kana izere Unogona kunyora zvinhu.
« Reply #1: Musi waFebruary 11, 2008, 01:15:26 am »
Yakanga yakanaka kwazvo, ini ndaifunga kuvhura musoro wenyaya pasi pezita rehurukuro, asi ndakafunga kusauvhura uye ndakafunga kuvhura.
« Reply #2: Musi waFebruary 11, 2008, 01:15:33 am »
sei iri muchiGerman
« Reply #3: Musi waFebruary 11, 2008, 01:18:14 am »
Yakatorwa kubva: emosh - Kukadzi 11, 2008 pa01: 15: 26 am
« Reply #4: Musi waFebruary 11, 2008, 01:21:26 am »
Ndine chokwadi chekuti ichashanda zvakanyanya, kunyangwe kana pasina munhu pano, iwe unokwana saJentzsch naEsma 41. Handina mubvunzo
« Reply #5: Musi waFebruary 11, 2008, 01:22:28 am »
Yakatorwa kubva: deniz yildirim - Kukadzi 11, 2008 pa01: 15: 33 am
Ehe, mazwi ari kuvhura mudhipatimendi redu, hazvisi zvinhu zvisina chinhu chete, zvinoshanda.
Tinogona zvakare kudzidza zvinhu.
Semuenzaniso, shamwari yedu yegungwa yakabvunza: nei iri muchiGerman?
Heino mhinduro: Junk = Zvinopambwa
Ini ndakanga ndisingazive kupamba zvakare .
Ndakaikopa kubva muduramazwi.
Ukandibvunza Krimskrams Ndingati.
« Reply #6: Musi waFebruary 11, 2008, 01:31:15 am »
Musikana akanaka 41, ikozvino tinogona kubva pano
« Reply #7: Musi waFebruary 11, 2008, 01:33:03 am »
Ndaiwanzoti bla bla bla futi
une showtv nhasi? Ndine urombo zvikuru;
Yaive makumi mashanu ytl kunze kwebhokisi remusikana ...
Ndanga ndave kuchema ndoda ...
Ndine shungu kwazvo, ndinogona kuchema nekukasira kune zvese izvo ALLAH akandipa ziso rine mvura, asi usandibata ...
Chii chichaitika kana ndichichema uye ndichichema?
« Reply #8: Musi waFebruary 11, 2008, 01:34:50 am »
Yakatorwa kubva: jentzsch - Kukadzi 11, 2008 na01: 31: 15 am
Hongu hongu ....
Ivo havachagone kutirambidza zviri nyore.
(kurambidza musoro wake pazasi)
Asi ngatinyorei chimwe chinhu pane mimwe misoro kunze kweiyi nyaya (esma anoziva chaizvo)
Nyora zvasara, Jentzsch ... kusagadzikana.
« Reply #9: Musi waFebruary 11, 2008, 01:36:15 am »
Yakatorwa kubva ku: sinemm - Kukadzi 11, 2008 pa01: 33: 03 am
« Reply #10: Musi waFebruary 11, 2008, 01:37:47 am »
Nhamo, ndine hurombo zvino .
Nehurombo, 50 ytl iri zvakare yakatemwa kwazvo.
Dai maziso ake anga asina kukwirira zvakanyanya, mudiwa wako madam changamire.
1 2 3 4 ... 4481 Enda kumusoro